မဝေမာလင်းသတင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ မဟုတ်မမှန်စွာ လုပ်ကြံလာသူ Qing Minya (ရှင်မင်းယာ) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« This CRIMINAL RAKHINE MONK MUST BE ARRESTED for spreading false news to create anti-Rohingya riots
ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်ရင်းသား မရှိဘူးဆိုသူများ… ကြည့်ကြပါ »
Ko Aung Than Nyunt Aungnilai
မဝေမာလင်းသတင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ မဟုတ်မမှန်စွာ လုပ်ကြံလာသူ Qing Minya
Qing Minya ဆိုသူမှ လူမှုရေးလုပ်ငန်း
များအားကျွန်တော်တို့နှင့်အတူဝိုင်းဝန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူ ဦးမောင်မောင်(ရွှေကရဝိတ်)အား ပုတ်ခတ်စော်ကားလူအများ
18•11•2013 ရက်နေ့တွင် လူတစု၏တိုက်ခိုက်မူ့ကိုခံခဲ့ရသူ မဝေမာလင်းအားကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေခြင်းအပေါ် ဦးမောင်မောင်သည် တိုက်ခိုက်သူတရားခံများထွက်ပြေးလွတ်မြောက်စေရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့ကူညီနေပါသည်ဟု ရေးသာစွတ်စွဲခဲ့ပါသည်၊
ထိုသတင်းတက်လာသည့်အတွက် Qing Minya နှင့်ရင်နှီးသည်ဟုသိရသူတဦးထံမှတဆင့် တင်ထားသည့်သတင်းမှာမှန်ကန်မှု့မရှိကြောင်းနှင့် ရေးသူ၏သိက္ခာနှင့် အရေးခံရသူတို့ ၏သိက္ခာအားထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း၊ဖျက်ပေးစေခြင်ကြောင်းတောင်းပန်အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်၊
သို့သော် Qing Minya သည် ကျွန်တော်သည်ပင်လျှင် ကြံရာပါသဘောမျိုး အနေရောက်အောင်ဆက်လက်ရေးသားလာခဲ့ပါသည်၊
တပါးသူအကျိုးပျက်စီးစေလိုသော သူ၏ စိတ်စေတနာဆိုးအားသတိထားမိလာရပါသည်၊
မဝေမာလင်းတို့၏မိသားစုဝင်များမှဖုန်းဆက်၍ ဤအမှုအားကြေအေးစေလိုကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏သားနှင့်သမီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမြန်ပြန်ရောက်နိုင်ရေးအာဆောင်ရွက်ပေးပါရန်အကူအညီတောင်းခံခဲ့ကြခြင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါသည်၊
Qing Minya သတင်းတက်လာသည်ကြောင့် ကိုအောင်ဇော်ဝင်းနှင့်မဝေမာလင်းတို့မှ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့ရေးသားပေးပို့လိုက်သောစာအား၎င်းတို့မိသားစုကိုယ်စား အစ်ကိုလတ်ဖြစ်သူ ပေးပို့ထားသောစာနှင့်ပူတွဲဖော်ပြပေးပါရန် တောင်းဆိုလာသည့်အတွက် ပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်၊
Qing Minya ဆိုသူသည် မလေးရှားနိုင်ငံတွင်းရှိ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်
မြန်မာအစ္စလာမ်ဘာသာ ဝင်များအကြားပြဿနာများကြီးထွားလာစေနိုင်သော အရေးအသားများအားအစဉ်တစိုက်ရေးသား လှုံ့ဆော်နေသ ယုတ်ညံ့သူတဦးဟု သိရှိလိုက်ရပြီး သတင်းများသည်စစ်မှန်ချင်းမရှိကြောင်း စနစ်တကျ အကွက်ချ၍ နှစ်ဖက်သောနိုင်ငံသားချင်း အမုန်းတရားကြီးထားသထက်ကြီးထွားစေပြီး အကျိုးပျက်စေရန်စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသား မည်သည့်ဘာသာဝင်မဆို သာရှိနိုင်ရန်နှင့် သတိ ရှိကြစေရန် ရေးသားလိုက်ရပါသည်ခင်ဗျား။
မဝေမာလင်းအတွက်….ပြည်ပအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ လှူဒါန်းငွေ Rm 900 အား အလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးစိုးဝင်းမှတဆင့် ကိုအောင်ဇော်ဝင်းထံ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်၊မိဆွေအပေါင်းသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။••••••••••••••••••••အောင်(နီလိုင်း)
ဧရာဝတီစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ – မလေးရှား(လူမှုကွန်ယက်)
Khin Nyein Chan Oo ကိုအောင်ဇော်ဝင်း သိစေရန်မှာ ကိုအောင်ဇော်ဝင်းတို့အမှုဖြစ်ဖြစ်ချင်း ကိုအောင်ဇော်ဝင်းတို့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မ
ခိုင်မိုးပွင့်မှ ကျွန်မအားအကူအညီတောင်းခံလာပါသောကြောင့် ကျွန်မမှတဆင့် ရှင်မင်းယာအား အကူ
အညီတောင်းခံခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သာ သံရုံးမှ တာဝန်ရှိ ကိုစိုးဝင်း ချက်ချင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတော့ ကျွန်မသိပါသည်
Khin Nyein Chan Oo ကိုအောင်ဇော်ဝင်း သိစေရန်မှာ ကိုအောင်ဇော်ဝင်းတို့အမှုဖြစ်ဖြစ်ချင်း ကိုအောင်ဇော်ဝင်းတို့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မခိုင်မိုးပွင့်မှ ကျွန်မအားအကူအညီတောင်းခံလာပါသောကြောင့် ကျွန်မမှတဆင့် ရှင်မင်းယာအား အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သာ သံရုံးမှ တာဝန်ရှိ ကိုစိုးဝင်း ချက်ချင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတော့ ကျွန်မသိပါသည်
Khin Nyein Chan Oo ကိုစိုးဝင်းအား မေးမြန်းနိုင်ပါသည် .
Khin Nyein Chan Oo ပြသနာတွေ ဖြစ်တိုင်း သံရုံးကို ဖိအားပေးပြီး အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာ ဆိုလို့ ရှင်မင်းယာ တယောက်ပဲ ရှိပါတယ် အကိုအောင်သန်းညွန့်ရေ
This entry was posted on November 21, 2013 at 1:33 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “မဝေမာလင်းသတင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ မဟုတ်မမှန်စွာ လုပ်ကြံလာသူ Qing Minya (ရှင်မင်းယာ)”
[…] မဝေမာလင်းသတင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ မဟုတ်မ… […]